कलाकार घिमिरेको उपचारार्थ बैंक खाता सञ्चालन, यसरि गर्न सकिन्छ सहयोग « Sagarmatha Daily News
कलाकार घिमिरेको उपचारार्थ बैंक खाता सञ्चालन, यसरि गर्न सकिन्छ सहयोग
काठमाडौँ । कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई वर्ष अघि कलाकारिता अध्ययन गर्न भारतको देरादुन गएकी निशा सडक दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार सम्भव नभएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बन्दै गइरहेको जनाइएको छ । निशाको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नवजीवन परोपकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले समाजिक सञ्जालमा घिमिरेको तस्बीर सार्वजनिक गरेका थिए । तस्बीरमा निशाको अवस्था दर्दनाकपूर्ण देखेपछि सहयोग गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठ्यो । दाहालले राखेको तस्बीरमा नर्भिक अस्पतालका निर्देशक मेघा चौधरीको नजर पर्यो । चौधरीले निशालाई अस्पतालले ल्याइ तत्काल निःशुल्क उपचार सुरुआत गरे ।
अहिले उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । निशालाई अस्पतालको उपचारपछि पनि पालनपोषण, हेरचाह र निरन्तर उपचारको जरुरत पर्ने भएकाले आर्थिक सहयोग सङ्कलन थालिएको हाे । कलाकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ-संस्थाले अहिले सहयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले निशाको परिवारलाई रु ५१ हजार सहयोग गरेको छ ।
निशालाई अहिले देश तथा विदेसमेतबाट सहयोग जुटिरहेको छ । उपचारमा थप सहयोगका लागि नवजीवनका अध्यक्ष दाहाल, चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौला र निशाका बुवा प्रेमप्रसाद घिमिरेको नाममा कृषि विकास बैंकमा खाता खोलिएको छ । ‘निशा घिमिरे संरक्षण कोष’को खाता नं. ०२१०४०१८८३००९०१८ रहेको दाहालले जानकारी दिए । सोमबार सो खातामा रु एक लाख ९७ हजार ५५० जम्मा भएको उनले बताए ।
समिक्षाको फेसबुकमा लेखिन् भाबुक स्ट्याटस ‘तिम्रो लागि सधै म हार्न सक्छु’
गायिका समिक्षा अधिकारी लामो समयपछि सामाजिक संजालमा सक्रिय देखिएकि छन् । जीवनको कठिन परिस्थिति र
तीन सय रुपैयाँ लिएर घरबाट भागेका यश यसरी बने ‘रक्की भाई’
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार रक्की भाई अर्थात् यश पछिल्लो समय आफ्नो नयाँ फिल्म ‘केजीएफः च्याप्टर–२’का
पूजा शर्माको कमाउने धन्दा !
काठमाडौं, १९ फागुन । नायिका पूजा शर्मा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बेला बेलामा विवादमा आईरहने नाम
पल शाह प्रकरणमा नेपाल चलचित्र कलाकार संघले मुख खोल्यो
काठमाडौँ– नेपाल चलचित्र कलाकार संघले हालै अभिनेता पल शाह र पल शाहसँग सम्बन्धित भनी आइरहेको